Maninona ianao no mila varavarana garazy mitaingina
Fitaovana Roller Doors
Ny garazy varavarana dia manarona ny varavarana lehibe indrindra ao an-tranonao, ny varavarana voaroaka dia hanampy amin'ny fampihenana ny famindrana hafanana na rivotra mangatsiaka ao amin'ny garazanao. Zava-dehibe io noho ny antony maro:
(1) Raha mifamatotra amin'ny tranonao ny garanao, ny rivotra ao amin'ny garazy dia afaka mivezivezy eo am-baravarana mankamin'ny faritra onenananao. Ny varavarana garazy misy voaroy dia hampihena ny fifindran'ny rivotra avy any ivelany mankany anatiny.
(2) Raha mampiasa ny garazanao ho atrikasa ianao dia ho lohalaharana ny fampiononanao. Ny varavarana garazy mitaingina dia hanampy amin'ny fitazonana ny mari-pana ao amin'ny garazy ao anatin'ny elanelam-potoana tery kokoa raha oharina amin'ny halehiben'ny hafanan'ny any ivelany.
(3) Raha eo ambanin'ny efitrano hafa ao an-tranonao ny garage-nao, ny rivotra dia afaka mivezivezy amin'ny valindrihana garazy mankamin'ny gorodon'ny efitrano etsy ambony. Ny varavarana voaroaka dia hitazona ny mari-pana ao amin'ny garazy ho marin-toerana mba hampihenana ny fiovaovan'ny maripana ao amin'ny efitrano etsy ambony.
(4) Ny varavarana garazy misy insulated dia matetika mangina kokoa ary manana atitany manintona kokoa noho ny varavarana tsy misimisy.
Inona no atao hoe R-Value?
R-Value dia refin'ny fanoherana hafanana ampiasaina amin'ny indostrian'ny fananganana sy ny fananganana. Manokana, ny sandan'ny R-dia fanoherana ny hafanana amin'ny fikorianan'ny hafanana. Mpanamboatra maro no mampiasa ny sanda R mba hampisehoana ny fahombiazan'ny angovo vokariny. Io isa io dia isaina amin'ny alàlan'ny hatevin'ny insulate sy ireo toetra simika ao aminy. Arakaraka ny maha ambony ny isa R, ny tsara kokoa ny toetra insulate ny fitaovana.
Bestar Model 5000 Series Garage Doors, miaraka amin'ny R Value 17.10, novolavolaina tamin'ny fananganana 3 (vy + insulation + vy), manome tanjaka miavaka, fahombiazan'ny angovo, fanoherana ny harafesina ary fihenan'ny tabataba. Ny hatevin'ny 2 "insulation polyurethane sy ny rubber rubber dia mampafana ny vavahady sy ny hatsiaka, ary ny vodin-tany kosa manampy amin'ny famehezana ny rivotra, orana ary lanezy.
Fitaovana varavarana garazy
Renqiu City, Faritanin'i Hebei.
Tanàna Jieyang, Faritanin'i Guang Dong.